Semalt: Ndingayifumana Njani Ukuba Ikhompyutha Yami I-Botnet Zombie?
Kukho inani elikhulu leentsholongwane, i-spyware, iimbongolo, i-adware, i-keyloggers, i-rootkits, i-Trojans, i-botnets, kunye nabasemva abahlaseli izixhobo zabasebenzisi imihla ngemihla. Ngelixa ezininzi zinokutshatyalaliswa zisebenzisa i-anti-virus kunye neenkqubo ezichasene ne-malware, kodwa ezinye ziyingozi, kwaye kuba nzima ukuba sikhusele iikhomputha zethu. UJason Adler, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uxwayisa bonke abasebenzisi be-intanethi ukuba i-malware njenge-botnets kunye ne-rootkits yindlela eyingozi kakhulu, kwaye akunakwenzeka ukuba sikhusele ukufika kwabo bonke. Uluhlu lweemvume zeenkqubo ezinobungozi kunye ne-baddies ye-intanethi ayikugqityi. Wonke umsebenzisi webhsayithi kunye nomsebenzisi weendaba zoluntu uye wawa lixhoba leZombi ze-botnet kunye nee-virusi zekhompyutheni ngendlela enye okanye enye.
Ii-Botnets zii-robot ezincinci kwi-intanethi evumela abantu bangaphandle njengabagxeki kunye nabakwa-spammers ukulawula iinkqubo zakho zeekhompyutha ngaphandle kolwazi lwakho. I-Botnets yinkonzo yamakhulu ukuya kumawaka ezixhobo ezisuleleke nge-malware - security assessment services	in portland. Ezi zixhobo ziqhagamshelana ngomnye othile kwaye zijolise ekulawuleni inombolo enkulu yamashishini amatsha imihla ngemihla. Injongo yabo kukuba idatha yakho, ukukhwina idivayisi yakho kwaye uthathe ulawulo lwenkcukacha yakho yentlawulo kwi-intanethi. Iqela labadlali be-cybercriminals lenza lo msebenzi kwaye kuthiwa yi-botmasters. Bahlasela izixhobo zakho ngaphandle kolwazi lwakho ngeekhompyutha zabo ezidibeneyo kwaye bafumane amadivaysi akho axhunyiwe kunye nenethiwekhi enobudlelwane. Kamva, le nethwekhi ingasetyenziselwa inani elikhulu lemisebenzi engenanto..I-Hackers kunye ne-spammers basebenzisa iintlobo zeebhennethi ezahlukahlukeneyo ukufeza imisebenzi yabo e-intanethi. Injongo yabo ephambili kukuba ukwazi konke malunga nenkqubo yakho, kodwa banokuba nomdla ekutshintsheni imali yakho kwi-bhanki enye.
iPC ibe yikhomputha ye-zombie
Ukuba isixhobo sakho siphumelele kwaye senza imisebenzi yaso ngemiyalelo yomnye umntu, ke kukho amathuba okuba i-botnet zombie ihlasele ikhompyutha yakho. Enye yeendlela idivayisi yakho ifuthelwa ngayo ukufakwa kwesoftware enobungozi. Ukuba usanda kulandwa kwaye ufake ifayile ye-antivirus, kufuneka uphande ngokufutshane malunga nomthombo wayo. Kufuneka uzame ukuvavanya ukuba uyilanda kwiziko elivumelekileyo okanye iqonga elingaqhelekanga. Akufanele ulande nayiphi na inkqubo okanye umdlalo ngaphandle kokwazi umthombo wayo. Kubalulekile ukuqinisekisa iifayile kunye neenkqubo ozikhuphelayo. Gwema ukucofa kwiikhonkco ezithunyelwa kuwe kuma-imeyile. Ngaphezulu, akufanele uvelise izikhonkco ze-imeyile kwaye ungafanelanga ukudibanisa kunye namanethiwekhi angabonakaliyo e-WiFi.
Iikhowudi ze-botnet zeTrojan zivame ukufihla kwii-attachments ze-imeyile. Ukuba ufumana i-imeyile enokuthi uzimisele ukuvula ifayile engcono, igama lexwebhu okanye ifayile ye-jpg, kufuneka uphando ngokupheleleyo. Kunoko, kufuneka ususe kuphela i-imeyile kwaye uhlole inkqubo yakho yekhompyutha ngokukhawuleza.
Ukufumana iintsholongwane ze-botnet kwisixhobo sakho
Unokufumana izifo ze-botnet ukuba ikhomputer yakho iyancipha okanye imise ukuphendula kwimithetho yakho kanye okanye kabini ngosuku. Ukuba umnxibelelwano lwenethiwekhi kunye ne-intanethi iyancipha, ngoko ke ifowuni yakho inokuba yingozi. Ukuba ikhompyutheni yakho ayivulanga ifayile ethile okanye iwebhsayithi nangona uyibuyisele kabini okanye kathathu, ke kukho amathuba okuba i-botnet zombiesile yona.